laacib » Laba Kamid Ah Xiddigaha Ree France Ee Qaybta Ka Ah Barcelona Oo Uu Loolan Ba&rsquo;ani Dhex Mari Doono Toddodbaadka Dambe & Ernesto Valverde Oo Kala Saari Doona.
Tababaraha laacibkii Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa u muuqda mid dhexda ka geli doona kala xulasho madax xanuun ah toddobaadka dambe marka ay kulan ka tirsan horyaalka La Liga la yeelan doonaan laacibkii Atletico Madrid.
Valverde ayaa kala xulan doona labada daafac dhexe ee kooxdiisa ee Clement Lenglet iyo Samuel Umtiti kaddib kasoo laabashada Samuel ee dhaawacii jilibka ahaa ee mudo garoomada u diiday.
Walow ay ahayd soo kabasho gaabis ah haddana waxa hubaanti ah in laacibkii daaweynta u qaabilsan Barcelona ay cadayn doonaan inuu laacibkii kusoo biiri doono Samuel Umtiti kahor intii aan la gelin kulamada caalamiga ah.
Dhaawaca jilibka kasoo gaadhay Umtiti ayaa madax xanuun ku ahaa laacibkii dhakhaatiirta Barcelona kuwaas oo doortay inay qaabab qadiimi ah u daweeyaan halkii uu ka mari lahaa qaliin mudo dheer garoomada u diida.
Haddaba, Kala doorashada labada daafac ee ree France ayaa ah mid quseysa Valverde, Lenglet ayaa boos joogto ah ka helay laacibkii waxaana uu samaynayaa bandhigyo horumarsan kaddib qaab gaabi ah oo uu ku bilawday horyaalka isagoo lamaane xoogan la samaystay Gerard Pique.
Iyadoo ay sidaasi jirto, Haddana waxa xusid mudan in maskaxda lagu hayo heerka weyn ee ay gaadhsiisantahay qaabka uu Umtiti u maareeyay inuu muhiim noqdo kahor dhaawaciisa waxaana ay u badantahay inuu booskiisa kusoo laabanayo.
Waxkasta oo ku saabsan kala xulashada labadan xiddig iyo midka uu Valverde dooran doono ayaa la ogaan doonaa toddobaadka dambe marka ay la dheelaan Atletico Madrid.